Ngubani uWhite Boy Rick? U-Eminem usete inkwenkwezi njengoRichard Wershe Jr. kwicandelo lama-50 elizayo - Inkcubeko
Ngubani uWhite Boy Rick? U-Eminem usete inkwenkwezi njengoRichard Wershe Jr. kwicandelo lama-50 elizayo
Eminem konke kusetelwe ukuba yinkwenkwezi njengoWhite Boy Rick kuthotho oluzayo loSapho oluMnyama oluveliswe yi-50 Cent. Umlinganiswa usekwe kubomi bokwenyani be-FBI enolwazi kunye nomthengisi wangaphambili weziyobisi uRichard Wershe Jr. aka White Boy Rick.
NgoLwesibini, nge-17 ka-Agasti, 2021, i-50 Cent yathatha i-Twitter ukubhengeza indima ka-Eminem kuthotho:
Ewe ewe ndizisa izinja ezinkulu ngaphandle, andikwazi ukwenza umboniso osekwe eDetroit ngaphandle kokubandakanya intsomi @eminem. Simfumene ukuba adlale i-White Boy Rick kwi-BMF, le sh * t iphume apha.
Ewe ewe ndizisa izinja ezinkulu ngaphandle, andikwazi ukwenza umboniso osekwe eDetroit ngaphandle kokubandakanya ilivo @memememes . Simfumene ukuba adlale uBoy Rick omhlophe kwiBMF, le ikaka ilapha. IQela lokuKhanya okuGreen #lungeliso #lecheminduroi pic.twitter.com/YaklhzgJER
- 50cent (@ 50cent) Nge-17 ka-Agasti 2021
Inkqubo ye- umxhasi Uqhubeke watyhila ukuba usebenzise ukungagugi kweziphumo ezizodwa ukwenza u-Eminem abonakale njengomntu ofikisayo ngokwemfuno yeskripthi:
Ndalathise iBMF EPISODE 7 iyamangalisa. Ndisebenzise idigital efanayo yokuguga kweziphumo ezizodwa abazisebenzisileyo kwi-Irishman. Ukuthatha @eminem abuyele kwiminyaka yakhe yobutsha.
Ndalathise iBMF EPISODE 7 iyamangalisa. Ndisebenzise idigital efanayo yokuguga kweziphumo ezizodwa abazisebenzisileyo kwi-Irishman. Yise e @memememes ebuyela kwiminyaka yakhe yokufikisa. IBOOMGreen ukukhanya Gang #lungeliso #lecheminduroi pic.twitter.com/dE5ctprePe
Rapper kuya kuthiwa iya kuvela njengenkwenkwezi yeendwendwe. Iingqungquthela zeStarz kuthiwa zixhomekeke kwimisebenzi yokuthengiswa kweziyobisi kunye nombutho obolekisa ngemali, iNtsapho yaseMnyama yeMafia.
Ibali lobomi lokwenyani likaWhite Boy Rick aka Richard Wershe Jr.
Owayesakuba ngumthengisi we-FBI kunye nomthengisi weziyobisi, uWhite Boy Rick aka Richard Wershe Jr. (Umfanekiso ngeGetty Images / kwiSebe lezoLungiso laseMichigan)
U-White Boy Rick wazalwa njengo-Richard Wershe Jr. ngoJulayi 18, 1969 kuRichard Wershe Sr kunye noDarlene McCormick eDetroit. Waqeshwa yi-FBI njengomntu onolwazi xa wayeneminyaka eli-14 ubudala, esiba ngowona mncinane we-FBI onolwazi kwimbali.
Waye waqeqeshwa ukuba abe ngumnxibelelanisi ngokuchasene neCurry Family, obunye bobukhosi obukhulu kwezolwaphulo-mthetho e-East Detroit. UWhite Boy Rick wayexabiseke kakhulu kwi-FBI, kuba waphumelela ukuzisa ulwazi lwekhonkrithi ngokuchasene neqela lolwaphulo-mthetho. Ngokusekwe kwidatha, amapolisa aqhube enye yezona zinto zibalulekileyo zathinjwa eDetroit.
Nangona kunjalo, ngokuthe ngcembe washenxiswa kwi-FBI, njengoko wafumanisa urhwaphilizo oluninzi kwinkqubo yezomthetho ngelixa wayesebenza njengearhente. Ukulandela isitayile sakhe namapolisa, uWhite Boy Rick waphela njengo iziyobisi kumthengisi.
Ngo-Meyi ka-1987, uWhite Boy Rick wayenjalo ubanjiwe ngokufumana iikhilogram ezisibhozo zecocaine eneminyaka eli-17 ubudala. Wagwetywa ubomi entolongweni phantsi komthetho ka-650-Lifer Law eMichigan. Ngaphandle kokugwetywa kwakhe, u-White Boy Rick wadlala indima enkulu kwi-Operation Backbone.
Uphando luye lwanceda ukugweba amagosa akhohlakeleyo eDetroit. Kumashumi eminyaka emva kokuba umntu owayenolwazi ebanjiwe, abaphembeleli bezobulungisa bavakalisa uqhankqalazo ngokuchasene nokugwetywa ubomi bakhe bonke nangona wayengumsebenzi we-FBI ngo-1990.
Isithende sobuso sijika ngo-2018
Oku kukhokelele ekubeni u-White Boy Rick akhululwe nge-parole ngo-2017 phantsi kwe-US Marshals. Nangona kunjalo, wenziwa ukuba asebenze eminye iminyaka emihlanu kwiNtolongo yaseFlorida State ngenxa yokuzibandakanya kwakhe kwindandatho yokubiwa kwemoto ngo-2008.
Kamva wabekwa kwiNtolongo yase-Florida. Kunyaka ophelileyo, ekugqibeleni wakhululwa elugcinweni ngenxa yokuziphatha kakuhle emva kokugqiba isigwebo sakhe.
Kwangoko kulo nyaka, uWhite Boy Rick wafaka isimangalo ngokuchasene nababesakuba ngamagosa e-FBI kunye namapolisa awayefudula evela eDetroit ngokuhlukumeza abantwana nokumsebenzisa njenge mpimpi xa wayesemncinci:
'Ukuba bendingenguye onolwazi ngeqela elisebenzayo, ngendingazange ndibandakanyeke kwimigulukudu yeziyobisi okanye ulwaphulo-mthetho nangaluphi na uhlobo ... Inkqubo yezobulungisa khange ibe yelungileyo kum. Oku kwakufuneka kwaziwe. Inyaniso ifuna ukuxelelwa. '
Ngeli xesha, umntu oneminyaka engama-52 ubudala uxele ukuba uthathe isigqibo sokufaka isandla kwimpilo yoluntu ngokunikwa ukutya. Uye wagqiba kwelokuba asebenzele uhlengahlengiso lwentolongo kwixa elizayo.
Olu luhlu lucwangciselwe ukuba lukhutshwe ngoSeptemba kulo nyaka.
Funda kwakhona: Indlu yaseGucci: Ibali lobomi lokwenyani likaPatrizia Reggiani ucacisile
Nceda i-Sportskeeda iphucule ubume bayo kwiindaba zenkcubeko ye pop. Thatha uvavanyo lwemizuzu emi-3 ngoku.
iindawo onokuya kuzo xa udikiwe
xa umfana engekho kuwe
kutheni ndifuna imvume kwabanye
Wazi njani ukuba unemicimbi yokuthemba
UJohn cena 6th move of doom
amagama ukuxelela umntu omthandayo
aretha franklin umhla wokukhutshwa kwemuvi